Seenaan Uummata Qabsoof Du’eef Dhokatee, Warri Ajjeesse Injifanno Harka Butate! – Ayyaantuu
HomeAfaan OromooSeenaan Uummata Qabsoof Du’eef Dhokatee, Warri Ajjeesse Injifanno Harka Butate!
Damee Boruutin, Waxabajjii 22, 2018
Hiriirri guyyaa Waxxabajjii 23, 2018magalaa Finfinnee keessatti bakka Masqal Adababaayi jedhamutti Mumicha Ministeeraa deegaruuf waamame maal akka akeekatee jiru hubachuun barbaachisaa dha. Hiriirrii kun dhiiga ilmaan Oromoo utuu wal irraa hin citiin dhangalaa’ee isa mootummaa EPRDF jilbeefachiisaa jiru bishaan godhee namni miseensa EPRDF tahe dhiiga uummataa wajjin dhangalaasaa ture tokko waan jijjirama kana fidaa jiru fakkeessuuf. Yaroo cee’umsa seenaa (historical juncture ) ayyaan-ilaallatoonnii fi ergamtoonni diinaa warra Habashaa jala galanii haqa uummata Oromoo gurgurachuun waan haaraa miti. Tattaaffiin amma godhamaa jiru yoo danda’an qabsoo abbaa biyyummaa Oromoo dhaamssu yoo dadhaban immoo laafisuuf. Gaafa ilmaan Oromoo gottuummaa guddaan bakka amma hiriirri waamamaa jiru kanatti mootumaa EPRDF irratti hiriira bahanii waraanni Agaazii ilmaan Oromoo akka bofaa mataa keessa falaxaan cagadee dhiiga irraa lolaasu namni dirmateef hin jiru. Gaafi tokko dhiigni lafa sana irratti dhangala’e ibidda tahee warra haqa Uummata Oromoo irratti shira xaxaa jiran kana ni guba.
Warri jijjirama kana fiduu qabsawaan kumaatamaan du’anii biyyoon nyaatee jira. Kumaatamni hedduun har’a illee mana hidhaa keessatti dararamaa jiru. Kan lakkobsi isaa hin beekamne utuu shororsaa mootummaa EPRDF jalaa baqatuu irbaata bineesaa fi allaattii tahee jira. Kan lubbuun hafee biyya alagaa keessatti rakkina hiriyyaa hin qabneef saaxilameera. Mootummaan EPRDF gamnummaa fi ashalummaan qabsoon uummataa akka gatatu gochuuf humna Imperiyaaliziim wajjin shira xaxaa jira. Akkumma Dr. Abiyi mataan isaa jedhe, namni tokko hojii mootummaa kan hojjechuu qabu seera mootummaan tahuu qaba. Seerri mootummaa hojii irraa ooluu qabu kun seera EPRDF baafate akka tahe wal nama hin gaafachiisu. Garuu namni gowwaan ykn beekaa gowwaa fakkaataanii fedha mataa isaaniif fiigaa jiran “TPLFf raawwateef jira”, “Dr. Abiyi waan barbaade hojjechuuf aangoo argatee jira”, jedhanii warra of sobaa jiran arguun gadda tokko. Ergaan isaanii ifaa dha. Amma danda’ame uummata dogongorsuu fi burjaajjessuu dha. Fuula duraan warri haala kana karaa qindaa’een oofaa jiru Habaashoota warra aangoo itti deebi’uuf foolataa jiranii fi Oromoota mindaa afaan kaa’aaf haqa saba isaanii guruguran akka tahe ifa jira.
Dr. Abiyi Mumicha Ministeera EPRDF malee kan Uummata Oromoo miti kan Uummata Impayeera Itoophiyaa illee tahee hin filamne. Warri hiriira nama tokkoof gona jedhu kijibaa jiru. Hiriira kan gochaa jiran mootummaa EPRDFf, kan uummata sana kumaataan hidhee, kumaatamaan ajjeesse , biyyaa saameef akka tahe beekamuu qaba. Hereegni siyaasaa TPLFiin EPRDF keessaa baasanii ilaaluu dogongora guddaa dha. TPLF filmaata ishee baasu filachaa jirti malee waan duutee EPRDF keessaa baate natti hin fakkaatu. Mumicha Ministeera kan muudate EPRDF akka tahe namni haalu hin jiru. Aangoo irra akka turu kan godhuu fi buusuu danda’u illee EPRDF qofa. Uummatni amma gumaa xaafii illee keessaa haqa hin qabu. Dri Abiyi isa sirbu wajjin sirbee, isaa gaddu wajjin gaddee, isa boo’uu wajjin boo’ee qalbii namaa hawwachaa jira. Utuu filmaani haqaa kan uummataan tahuu jiraatee gochi isaa beeksisa gaarii ( good public relation) dha. Garuu har’a hireen isaa harka EPRDF qofa akka jiru innuu dagachuu hin qabu.
Dr. Abiyi kun baka nama lamaa fi sadiin ajjeefamee fi qee’ee isaa irraa buqqa’e deemee yaroo nama jajjabeessu agarra. Uummatni Oromoo miliyoonaan qee’ee isaa irraa buqqaa’ee jireenya gadadoo jiraachaa jiruu fi warri guyyaa guyyaan waraanni fixaa jiru maal isatti balleesse? Yaroon amma barreessaa jiru kana waraanni Agaazii fi Liyuu Poolisii Somaalee Oromoota ajjeessaa jiru.Yoo aangoo biyya bulchuu kan qabu tahe maaliif ajjeechaan Oromoo hin dhaabbatu? Afaan isaan warri qawwee qabatee bilisummaaf lolu faashinaa yaroon itti darbe jechaa jira. Maaloo yoo dhugaaf dubachaa kan jiru tahee waraana Liyuu Poolisii Somaalee fi Agaazii kan guyyaa hundaa Uummata Oromoo shorkokeessaa jiru yoo qawwee irraa hiikachiise? Isa boodaa warra hidhatee qabsoo gochaa jiru arabsuu fi tufachuun irraa bareeda.
Uummatni Oromoo waanjoo garbummaa jalatti kan kufe gargaarsa imperaalistootan akka tahe ifa jira. Sana Boodas mootumaa Habashaa dantaa isaa tikstu eegachuuf jecha gaarsi isaan godhan qabsoo keenyaaf gufuu guddaa tahee ture, Amma har’aas itti jiru. Uummatni Oromoo aarsaa madaallii hin qabnee baasee qabsoo abbaa biyyummaa dhumaan gahee jira. Godaansa qabsoo kana keessatti biyya lafaa Ameerikaa fi Awuropaa dabalatee eenyummaa isaa agrsiisee jira. Yoo akkuma kan duraa deebinee gowwomne jedhanii shiraa Habashaa baran jalaa haa daadisan malee kan humna biyya bulchuu qabu uummata Oromoo akka tahe hubatanii jiru.
Uummatni Oromoo mila isaa laftti gad hordee dhaabbii isaa jabeefatee qabsoo abbaa biyyummaaf godhaa jiru caalatti finiinsuu qaba. Qabsoon abbaa biyyummaaf goonu bakka tokko gahee kan dhaabbatu utuu hin taane dhala irraa dhalatti kan darbu tahuu qaba. Yoo nuti jabbaannee qabsoofne warri har’a iji tokkon gara warra Habashaa beekanii ilaalaa jiran, boru ija lamaan akka gara Uummata Oromoo galagalan mamii qabaachuu hin qabnu. Biyyi lafaa humanatti amana . Ulfina fi beekumsa argachuuf humana qabaachuu qabna. Kanaafuu qabsoo abbaa biyyuummaaf dhiiga amma kana itti lolaafnee kaanee, injifannoo keenya immoo warra kaleessaa dhiiga ilmaan keenyaa dhangalaasaa tureef laatnee gallee hin rafnu. Qabsoo Fincila Xumura Gerbummaa WBO fi QBO wajjin itti mudduu qabna.